- ရောက်တဲ့အရပ်မှာ ပျော်အောင်နေ၊ - မပျော် ရှိရိုးလား ။ရောက်တဲ့နေရာမှာ ပျော်စရာတွေ လိုက်ရှာပြီး နေလိုက်တာပေါ့ ။း)
- တွေ့ တဲ့ သူနဲ့တည့် အောင်ပေါင်း ၊ -လမ်းထိပ်က ကုလားမကြီး အကြော်ဆိုင် မှာ တည့်အောင် ပေါင်းစားတတ်နေပြီ ။( ချွင်းချက် ။ ။ အကောင်စိမ်းစိမ်း အမြီးရှည်ရှည် များ ၊ ပုတ်သင်ညို လို ခေါင်းငြိမ့်ပြီး ရေမြေ အလိုက် အရောင် ပြောင်းတတ်သူများ နှင့်တော့ တည့်အောင် မပေါင်းတတ်သော ပေါင်းသင်းဆက်ဆံ ရေး ညံ့ဖျင်း လှသူ အကျွန်ုပ်မှာ အဆိုပါ ကုလားမကြီးကို အပေါင်းအသင်း ဖွဲ့ ရာတွင်တော့ အခက်အခဲ မရှိလှပါ ။ )
- ရှိတာလေးနဲ့ လှအောင်ဝတ် ၊- မရှိတာကြီးကို မဝတ်နိုင်တော့လည်း၊ ဝတ်ထားတာလေးပဲ လှတယ် တွေး ပြီး နေလိုက်ပါတယ် ၊ I-Max နဲ Step အထည် ကြော်ငြာ ထဲက ဝတ်မှုန်ရွှေရည် တောင် ကိုယ့်လောက် မလှသလိုပဲ ။ ဟဲ ဟဲ။.
- ရတာလေးနဲ့ဝအောင်စား ၊- ဩော် .. တနေ့ ၊တစ်သိန်းလောက် ရရင် တော့ ဝမယ် ထင်ရတာပဲ ။ တော်ပါပြီလေ ၊ သိပ်ဝ အောင် စား နေတော့လည်း အဆီပိတ်ပြီး ဒယ်အိုး ထဲရောက် ၊ www.အဝီဇိ .com မှာ လင့်ခ် ချိတ် နေရမှာ စိုးလို့၊ မဝ တဝ လေးပဲ စားပါတော့မယ် ။
- နိူင်လိုသူ ကို ၊ အရှုံးပေး နှလုံး အေးတဲ့ ဆေး ။ - ဪ... အနိုင်လို နေတဲ့သူကို အရှုံးတွေပေးလိုက်ရင် သူ့ ခမျာ အရှုံးတွေ ချည်း ပုံနေတော့မှာ ပဲ လေ ။ ဘယ်လို လုပ်ရပါ့ ။ အနိူင် လို သူကို အနိုင်ပေး ။ ရွှေလိုသူကို ရွှေပေး ၊ ငွေလိုသူကို ငွေပေး၊ မအေ လို သူကို .... အဲ.. အဲ .. ခက်ကုန်ပြီ ။ ( ဘုရားဟော တရား ၊ ဆုံးမ စာ များကို ကပျက်ကချော် လုပ်ခြင်း မဟုတ်ပါ ။ ဂျစ်ကန်ကန် အတွေးများကို ယနေ့ ထိ တွေးနေမိပါသေးသဖြင့် .... တွေးမိသလို ရေး မိ ပါ သည် )
ဒါကြောင့် လောလောဆယ်မှာ ဒီလို နေ နေ ပါတယ် ။
:Khyl : at 7/26/2010 01:28:00 AM
အာဇာနည်နေ့တို့ မမေ့ပေမဲ့ ၊
သူတို့ တတွေ စည်းစိမ်ယစ်ကာ
အာဏာတရူး ၊ ဥစ္စာရူး များ၊
ခိုးဆိုးတိုက်ခိုက် ဒီလူမိုက်တို့ ၊
ဒီမိုး ဒီလေ ဒီလူတွေ နဲ့
ဒီမင်း ဒီဆိုး ဒီသူခိုးတွေ ၊
သက်ဆိုးရှည်လို့၊
တို့ ပြည်သူ ဘဝများ မလှပစွာ
အဖက်ဖက်က အောက်ကျ ဆင်းရဲ
မွဲတေ ငတ်ပြတ် လူဖြစ်ကျိုးမနပ်ရပြီပေါ့။
ဒီနေ့ဒီရက် ဒီ နံနက် အချိန် ၁၀နာရီ ၃၇ တိုင်း
အားလုံး ငြိမ်သက် ဦးညွှတ်လျှက်
ဥသြတွေဆွဲ အလေးလည်းပြုကြ ၊
ရှေးက အစဉ်အလာ ၊ ခုမှာတော့ အဖျက်ခံရ ရှာပေါ့ ၊
သို့ ပေငြားလည်း ၊ငါတို့ အားလုံး
ဇူလိုင် ၁၉ ဒီနေ့ဆိုး မှာ
ဘဝင်ညှိုး လို့ ၊
ှဗိုလ်ချုပ်မှာ စကား ရင်ဝယ်ကြားလို့၊
ကမ္ဘာမကြေ မြန်မာပြည်ရဲ့ 
အာဇာနည် အပေါင်း နဲ့ ဒီခွပ်ဒေါင်း အား
ကိကိ ( ၂၀၁၀ ၊ ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက် )
သခင်အောင်ဆန်း (သို့ ) သားတယောက်ရဲ့အား
အမိမြေနဲ့လူသားများအတွက်
မှန်တဲ့ဘက်က အောင်ရမယ်လို့ 
ခိုင်ကြည်တဲ့ စိတ်နဲ့လမ်းပြခဲ့
စိတ်တခုကို ကိုးကွယ်ဖို့ 
အသက်ကို စွန့် ပြီး
သူ့ စိတ်ကို ကမ္ဘာမြေအနှံ့ မွှေးမြစေခဲ့။
စိတ်က လက်နက်မချဘူး ဟေ့.....
၁၉ ဇူလိုင် ၂၀၀၀ ။
( လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်က ကိုစောဝေ ဖွဲ့ ဆို ခဲ့ တဲ့ ကဗျာ အား အမှတ်တရပြန်လည် ဖေါ်ပြ လိုက်ပါတယ် )
:Khyl : at 7/19/2010 12:24:00 AM
အာရုဏ်ဦး မိုးဦးသောက်လို့အလင်းရောက်ပြီ ဆိုတော့ အိပ်စက်အနားယူခြင်းမှ နိုးထလာရတော့သည်ပေါ့ ။ ရွာပြန်ရောက်ကာစ နေသားမကျတာတွေ ရှိပေမဲ့ စိတ်ပမ်းကို သည်လိုဖြေဖို့ ...( ကဗျာမဆန် စာမဆန်တွေ ရေးဖို့ ) မနည်းမနော အားထုတ်မိသည် ။ မြင်မြင်သမျှ ကြားကြားသမျှ ဘဝင်မကျတာတွေသာ ရေးချရမည် ဆိုပါလျှင် လက် ဆယ်ချောင်းကျိုးရုံသာမက ရှိရှိသမျှ ၃၂ ချောင်းသော သွားများပါ့ ( အံကြိတ်ရဖန်များလွန်း၍ ) အမှုန့်ဖြစ်ရပေတော့မည် မို့သဘောလောက်သာ ရေးရပါတော့မည် ။ မျက်စိ စပါးမွှေးစူးသူများ နားကလောသူများ ကျော်ခွ၍ သွားကြပါလေကုန် ။....
အလုပ်မရှိ ၁၀၉-၁၁၀ သို့ တည်းမဟုတ် အငြိမ်းစားဘဝ သို့နေ့ ချင်း ညချင်း ကူးပြောင်းသွားရရှာ လေသော အကျွန်ုပ် မှာ ယခုကျမှ ငယ်စဉ်အခါ သင်ခဲ့ရဖူးသော သင်ပုန်းကြီးဖတ်စာ ပါ ၊ စောစောထ၊ အိပ်ယာသိမ်း ၊သွားတိုက် ၊ မျက်နှာသစ၊် အစာစား ၊ အဝတ်လဲ ၊ ကျောင်းသွား အစရှိသည် များ ထဲမှ ကျောင်းသွားခြင်းအမှုကိစ္စ ကို လုပ်စရာ မလိုတော့သည်မို့ ၊ ဘုရားကျောင်းကန်လည်းနေ့ စဉ် မသွားနိုင်သေးသည်မို့ကျန် အချက်များ မှ အံဝင်ဂွင်ကျ ဖြစ်သည် များကို အံမကျစွာ လိုက်လုပ်ရင်း နိစ္စဓူဝ ဖြစ်စဉ်များကို ဖြတ်သန်းလျှက်ရှိနေပါသည် ။
နံနက် ၆ နာရီ မတိုင်မီ ကန်ဘောင်ပေါ်ရောက် ၊ လုပ်စရာ ရှိတာလုပ် ... အမောဆို့ပြီး ခြေထောက်ညောင်းတဲ့ အချိန် အိမ်ပြန်လာ ပြီး သူများလုပ်စာကို ထိုင်စားပါတော့သည် ။ပါးစပ်က စား နေဝါးနေတုံး၊ မျက်စိက အားနေမစိုးလို့၊ ဟိုစာ ဒီစာ ဖတ်လေ့ရှိသော အကျွန်ုပ်၊ ဒီတခေါက် ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်ပြန်ရောက် တော့ အိမ်မှာ ထူးခြား နေတာ တခု သတိပြုမိသည် ။ နှစ်ပေါင်းများစွာ မမြင်ရ မဖတ်ရတဲ့ သတင်းစာ ..... ဘာသတင်းထူးမှ မပါလို့ ၊ အိမ်မှာ မယူတာကြာလို့ မေ့တောင် မေ့နေတဲ့ သတင်းစာ .. အံမယ် .. ဒီသတင်းစာတွေ အိမ်မှာ ပြန်ယူနေပါရော့လား ။ ဘယ်လို အတွေး အမြင်သစ်တွေ ပြောင်းသွားရတာပါလိမ့် ။ ဒါ နဲ့ ပဲ အနားမှာ ရှိနေတဲ့ ညီမ ဖြစ်သူကို မေးကြည့် မိသည် ။ သတင်းစာ ယူရခြင်း အကြောင်းရင်းမှာ သတင်းဖတ်ရန်မဟုတ် ၊ အတင်းတွေရေးထားတာလည်း ဖတ်ချင် သိချင်၍ မဟုတ် ။ နာရေး ကြော်ငြာ ကြည့်ရန် မျှသာ ဖြစ်ပါကြောင်း ....
မိတ်ရင်း ဆွေရင်းများ ၏ နာရေး ကိုမျှ မသိလိုက်ပါ၍ သတင်းမမေးမိလိုက်ရခြင်းများ အသုဘရှု မသွားဖြစ် လိုက်ခြင်းများ အခါခါ ဖြစ်ခဲ့ရသည်မို လူမှုရေး ဝတ္တရားများ ပျက်ခဲ့ရသည်မှာ လည်း အခါခါ ၊ ဒီတော့ နာရေးကိစ္စ အတွက် အနည်းဆုံး ဖုံးကလေးဆက်ပြီး သတင်းမေးနိုင်ရလေအောင် သတင်းစာကို ပြန်ယူနေရပါသည် ။ ခုခေတ်ကြီးမှာ ယခင် ကြံတော သုသာန် လို နီးနီးနားနား အဆင်ပြေပြေ အသုဘပို့ ဆောင်ရန်လည်း မလွယ်ကူတော့ ၊ သွားရ လာရ ခရီးဝေး ၊ ကရိယထ လည်းများ၊ ခရီးစရိတ်လည်းများ တော့ အသုဘ ပို့ ဆောင်သူများလည်း တော်ရုံ ခင်မင်မှု ဖြင့် မလာရောက်နှိုင် ကြသည်ကို အားလုံး သဘောပေါက် နားလည်ပြီးသား ၊ အထာကျ ပြီးသား ဖြစ်နေကြလေပြီ ။ မျက်နှာကြီး၊ နာမည်ကြီး ပုဂ္ဂိုလ်များ အသိုင်းအဝိုင်း အသုဘ များ မှ လွဲ၍ ရေဝေး ၊ ထိန်ပင် ၊သုသာန် တို့ မှ အသုဘများမှာ ခြောက်ကပ်မြန်ဆန်စွာဖြင့် ပြီးဆုံးသွားလေ့ရှိသည်မှာ လည်း ထုံးစံ တခု လို ဖြစ်နေပေပြီ ။ တချို့ မှာ အသုဘ အိမ် သို့ သာ သွားရောက် သတင်းမေးခြင်းမျှသာ ပြု နိုင်ကြတော့သည် ၊ ဒါမှ မဟုတ် လမ်းတဝက် ၊ လမ်းအစ လောက်အထိသာ အသုဘ ယာဉ်တန်း နှင့် အတူ လိုက်ပါခြင်း ၊ အချို့ မှာ သုသာန် မှ စောင့်ကြို ပြီး အသုဘ ရှုခြင်း ၊ စသဖြင့် အဆင်ပြေ သလို ပြုကြ ပို့ ကြ ရလေသည် ။ ဒါကို မော်ဒန် အသုဘ ပို့ ဆောင်ခြင်းဓလေ့ ဟု မှတ်ယူမိပါသည် ။
ထားပါတော့ အသုဘ အကြောင်း ၊ လောလောဆယ် အတွက် မော်ဒန် သတင်းစာ ဖတ်နည်း အကြောင်း ပြောချင်မိသည် ။ အကျွန်ုပ် အပါအဝင် ပုံမှန်လူများ ၏ ယနေ့ ခေတ်ပေါ် သတင်းစာ ဖတ်နည်း တခု ဟုလည်း ဆိုနိ်ူင်ပါသည် ။ တံငါနားနီးတံငါ ၊ မုဆိုးနားနီး မုဆိုး၊ ဆိုသလို တရုပ်နားနီးတော့ တရုပ်နည်းပေါ့ ၊ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရှိ ရှိသမျှ လူမျိုး အများစု မှာ စာအုပ်ဖြင့် တရွက်ချင်းလှန်ပြီးဖတ်ရသော စာအုပ် စာရွက်ဟူသမျှ ကို ရှေ့ ဆုံး စာမျက်နှာ မှ နောက်တရွက် သို့ဘယ်ဘက်မှ ညာ ဘက်သို့အစဉ်အလိုက် လှန်ကြ ဖတ်ကြ ပါသည် ။ သို့ သော်ငြားလည်း တရုပ် လူမျိုး တရုပ်စာပေ များ ၊ အများစု မှာ စာကို ညာ ဘက်မှစ၍ ဘယ်ဘက် သို့ရေးသကဲ့သို့အထက်မှ အောက် ဒေါင်လိုက် လည်းရေးလေ့ ရှိကြပြီး စာရွက် စာအုပ် စာမျက်နှာများ ကိုလည်း ညာဘက်မှ ဘယ်ဘက် သို့( တနည်းဆိုရလျှင် အနောက်မှ အရှေ့ သို့) လှန်ဖတ်လေ့ရှိကြသည် ။ အာရေဗျ စာပေ တချို့ လည်း ဤသို့ ရှိကြောင်း ကြားဖူးသည် ။ ဟုတ် မဟုတ် တော့ မသိပါ ။
င်္ဒီတော့ ခုခေတ် မော်ဒန် သတင်းစာ ဖတ်နည်း မှာလည်း တရုပ်နည်း ဟု ဆိုချင်ပါသည် ။ နောက်ဆုံးတရွက် စာ မျက်နှာ ၂၀ ..( မဖတ်ဖြစ် တာ များသည် ၊ အောက်မှာ ကြည့်လျှင် သိနိူင်ပါသည် ၊း))
နောက်ဆုံးမှ စ၍ တမျက်နှာ လှန်ပြီး ဖတ်လျှင် စာမျက်နှာ ၁၉ - နာရေးသတင်း ၊ အသုဘ ကြော်ငြာများ ။ ဝမ်းနည်း ကြေကွဲ ကြသူများ ကို တွေ့ ရပါလိမ့်မည် ။ မိမိ ဆွေမျိ်ုး မိတ်ဆွေ များ နာမည် ဆင်တူသူများကို တက်သုတ်ရိုက် ရှာ ကြည့် ပါ ။ မတွေ့ လျှင် သက်ပြင်းတချက်ချ နိုင်ပါပြီ ။ ပြီးလျှင် နာမည် ထူးဆန်းများ ၊ ဆွေမျိုး ထူးဆန်းများ ၊ ဂုဏ်ဒြပ် များစွာ ဖေါ်ပြထားသော သာရေး သတင်းကြော်ငြာ၊ စေ့စပ်ကြောင်းလမ်း ၊ မင်္ဂလာဆောင်၊ မွေးနေ့ ဆုတောင်းကြော်ငြာ များ ဆီသို့ မျက်စိ တချက် ဝေ့ကြည့်လိုက်ပါ ။ စိတ်ဝင်စားပါက အစ မှ အဆုံး သေချာ ဖတ်ပါ ၊ မှတ်ပါ ၊ ထို့ အပြင် ကွာရှင်း ပြတ်စဲ ၊ စွန့် လွှတ် ခြင်း ၊ ကန့်ကွက်ရန် ကြော်ငြာများ ၊ စီးပွားရေး ကြော်ငြာ များ ၊ ရုပ်ရှင် ဗီဒီယို ကြော်ငြာများ၊ ပစ္စည်းမျိုးစုံ ၊ စားသောက်ကုန်၊ သင်တန်းပေါင်းစုံ ၊ ဆိုင်ပေါင်းစုံ ၊ လုပ်ငန်းပေါင်းစုံ ကြော်ငြာ အစရှိသဖြင့် ... မုးမေ့သွားမတတ် .. ဖတ်ရှု နိုင်ပါသည် ။ ၆ မျက် နှာ အပြည့် ၊ ဆိုဒ် အစုံ ၊ ကြော်ငြာ စုံ ကို ကြည့်ရတာ အားမရ နိုင်သူ များ အတွက် ၊ ရောင်စုံ ကြော်ငြာ အချပ်ပို ဆိုတာလည်း ရှိပါသေးသည် ။ ဒီတော့ ဖတ်စရာ သတင်း စာ မျက်နှာ ဘယ် လောက် မျှ မကျန်တော့ ။ ကောင်းပေစွ ။ ကောင်းပေစွ ။ ကောင်းပေစွ ။ မိုးလေဝသ သတင်း ၊နှင့် မြန်မာ့ ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ် ဆိုတာ တွေလည်း အသုံးတည့်မည့် အချိန်မှာ ဖတ်ပါ မှတ်ပါ ။
နေပါအုံး ၊ သတင်းစာ ဖတ်နေမကျ တော့ တခုခု လိုနေသေးသည် ဟု ထင်လိုက်မိ လို့မရမက လိုက်ရှာ မိပါသည် ။ နိုင်ငံခြား သတင်းးးးးး ။ “ဟိုက်” .. စာရွက် များ ကျော်သွားလေ သလား ၊ ပြုတ်ကျန် ခဲ့လေသလား ။ ဘယ်လိုမှ ရှာ မတွေ့၊ နောက်မှ ရှေ့ သို့ ၊ ရှေ့ မှ နောက်သို့အပြန်ပြန် အလှန်လှန်ရှာကြည့် မိသည် ၊ စာမျက်နှာတွေက အစီအစဉ်အတိုင်း စီထားတာ မဟုတ် ၊ ဟိုရောက် ဒီရောက် ဆိုတော့ လူလည်း မူးနောက် လာပါတော့သည် ၊ ဒီအချိန်မှာပဲ ၊ တွေ့ ပါပြီ ၊ တွေ့ ပါပြီ ၊ စာမျက်နှာ ၄ မှ ။ “နိုင်ငံတကာ သတင်းများ ”အင်း အကျွန်ုပ်ပဲ မျက်စိ မှုန် နေလေရော့သလား ။ ကမ္ဘာကြီးပဲ အမှောင်ကျ သွားလေသလား ၊ ကမ္ဘာကြီးအပေါ်မှာပဲ ဒီထက် ဘာမှ ထူးခြားတဲ့ သတင်းတွေ မရှိတော့တာ လား ။ထိုစာမျက်နှာ တွင် ငပွကြီးတို့တိုင်းပြည်မှ အနိဌာရုံများ ၊ သတင်းဆိုးများ ကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည် ။ မုဒိတာပွားပြီး အကုသိုလ် မဖြစ်အောင် လည်း လေ့ကျင့်ယူနိုင်ပါသေးသည် ။ တွေးတတ်လျှင် အမြတ်ပဲပေါ့ ။ခုတလော မှာတော့ ကမ္ဘာ့ ဖလား ဘောပွဲသတင်းလေးများ ရှိနေသေး သဖြင့် အချိန်အနည်းငယ် ဆွဲပြီး ဖတ်ရှုနိုင်ပါသေးသည် ။
ဤသတင်းစာ ထိုသတင်းစာ အနှီသတင်းစာများတွင် တခါတရံ နေကြပ်တာ လကြပ်တာ တွေ ၊ ကြိုကြား လေးတွေ တော့ ပါလာတန် ကောင်းပါရဲ့၊ ကားတွေကြပ်တာ လူတွေကြပ်နေကြတာ တွေတော့ မသိချင် မမြင်ချင်တော့ ပါလေ ။ ဒါကြောင့် သတင်းတွေပါတဲ့ သတင်းစာမှ သတင်းတွေ ရွေးဖတ်ရန် မျက်မှန်အသစ်တလက် လုပ်ရပါအုံးမည် ။း))
ဪ .. တချက် ကျန်နေသေးသည် ။ သတင်းစာ ပြန်ယူလို့့ အလဟဿတော့ မဖြစ်ပါ ။ Recycle တွေ ခေတ်စားနေသော ခေတ်ကြီးမှာ သတင်းစာ အဟောင်းများ မှာလည်း အသုံးဝင် ဆဲ ရှိနေပါသေးသည် ။ အိမ်ရှေ့ခပ်ဝေးဝေးမှ အော်သံ ရှည်ရှည် ကြားလိုက်မိ၍ နှစ်တွေ ၊ခေတ်တွေ စနစ်တွေ ဘယ်လိုပြောင်းပြောင်း သူတို့ ကတော့ မပြောင်း ဆက်လက်ရှင်သန်လျှက် ရှိနေပါသေးလား ဟုလည်း တွေးမိလိုက်ပါသည် ။
“သတင်းစာ အဟောင်းတွေ ဝယ်တယ် ။ နို့ ဆီခွက်တွေ ပုလင်းတွေ ဝယ်တယ် ၊သံတိုသံစ တွေ ဝယ်တယ်၊ ဒန်အိုး ဒန်ခွက်တွေ ဝယ်တယ် ..@$!*&)#%( ...”
နား ...နား ပြီး ပြောပါမည့် အတွက် ဒီတပါတ် အတွက် တော်အုံးမည် ။
:Khyl : at 7/11/2010 02:21:00 AM